Organic Raised Bed မြေဆီလွှာ - အောင်မြင်မှုအတွက်တည်ဆောက်ခြင်း - မြေဆီလွှာနှင့်ဓာတ်မြေသြဇာ
Organic Raised Bed မြေဆီလွှာ - အောင်မြင်မှုအတွက်တည်ဆောက်ခြင်း
ပထမဆုံးအကြိမ်ဥယျာဉ်မှူးများအတွက်အကောင်းဆုံးရှုပ်ထွေးမှုတစ်ခုမှာမြေဆီလွှာရောနှောခြင်းဖြစ်သည်။ ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်၊ အားလုံးကအကောင်းဆုံးအော်ဂဲနစ်ထမြောက်တဲ့အိပ်ရာမြေဖြစ်သည်။ အချို့သောအိတ်များအရောအနှောများသည်များသောအားဖြင့်ဥယျာဉ်မှူးအသစ်များအတွက်အစပြုရန်နေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
သို့သော်မြေဆီလွှာသိပ္ပံပညာသည်အိတ်တစ်ပွင့်ကိုဖွင့်ပြီး၎င်းမှအံ့ဖွယ်ကောင်းသောကျန်းမာသောအပင်များရှိခြင်းထက်အနည်းငယ်ပိုသည်။ သင်၏ဥယျာဉ်မြေဆီလွှာသည်အစိတ်အပိုင်းအမျိုးမျိုး၏သက်ရှိနှင့်ရှူရှိုက်မိသည့်ရောစပ်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သဘာဝအခြေအနေတွင်မြေဆီလွှာသည်အလွှာများစွာ၊ ဖွဲ့စည်းထားသည့်ကျောက်တုံးကဲ့သို့သောအော်ဂဲနစ်များနှင့်ပျက်စီးယိုယွင်းသောအရွက်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ရောဂါပိုးမွှားများ၊ မှိုများနှင့်အခြားအရာများပါ ၀ င်သည်။ သူတို့အတူတကွငါတို့စိုက်ပျိုးသောအရာများအတွက်အခြေခံဖြစ်သည်။
မြေဆီလွှာကိုသဘာဝအရနေရာမှယူပြီးအိပ်ရာပေါ်သို့တင်လိုက်သောအခါရည်မှန်းချက်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ မြင့်မားသောကုတင်မြေသည်နွေ ဦး ရာသီတွင်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာနွေးထွေးစေပြီးအခြားမြေဆီလွှာများထက်ပိုမိုရေနုတ်မြောင်းလိုအပ်သည်။
ဒါကြောင့်ထမြောက်အိပ်ရာရောနှောခြင်း, သူတို့ဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာ, သူတို့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ, သူတို့ကိုအသကျရှငျနှင့်ကျန်းမာစေခြင်းငှါအဘယ်သို့ပြုသင့်ပါတယ်။ ကျန်းမာသောမြေသည်ကျန်းမာသောအပင်များကိုဖြစ်စေသည်၊ ထို့ကြောင့်မှန်ကန်စွာစတင်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
Espoma Earthworm Castings
“ မြေဆီလွှာ” ဟူသောအသုံးအနှုန်းကိုမကြာခဏအလွဲသုံးစားလုပ်သည်၊ သို့သော်အနှစ်သာရအားဖြင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့မကြာခဏခေါ်သောဖုန်ကိုရည်ညွှန်းသင့်သည်။ သင်၏ခြံထဲရှိပျမ်းမျှဥယျာဉ်မြေဆီလွှာသည်များသောအားဖြင့်အနည်းဆုံး ၄၅% သတ္တုဓာတ်ပါဝင်မှု၊ လေနှင့်ရေခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းစီနှင့်ပျက်စီးသွားသောအရွက်များကဲ့သို့သော ၅% သောအော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ ဤကိန်းဂဏန်းများသည်ဒေသနှင့်မြေဆီလွှာအရည်အသွေးပေါ် မူတည်၍ အနည်းငယ်ကွဲပြားသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ကောင်းသောမြေအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။
ဓာတ်သတ္တုပါဝင်မှုသည်အမျိုးအစားကွဲပြားသော်လည်းမြေဆီလွှာအမျိုးအစားများကိုအမှုန်အရွယ်အစားအများအားဖြင့်ဖွဲ့စည်းသည်။ အကြီးဆုံးအမှုန်အရွယ်အစားကိုကျွန်ုပ်တို့ရည်ညွှန်းသည် သဲ ။ အကောင်းဆုံးကတော့ ရွှံ့စေး ။ နှစ်ခုအကြားဖြစ်ပါတယ် နုန်း ။
မြေဆီလွှာအမျိုးအစားတစ်ခုစီသည်ကွဲပြားသောဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။ ရွှံ့စေးသည်အတူတကွကပ်လေ့ရှိပြီးနေရောင်ခြည်တွင်ဖုတ်သောအခါကျောက်တုံးကျောက်ဖြစ်လာနိုင်သည်။ သဲသည်လွတ်သော်လည်း၊ ၎င်း၏ကြီးမားသောအမှုန်အရွယ်အစားသည်ရေများများစားစားမရှိဟုဆိုလိုသည်။ နုန်းသည်ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်ခြင်းနှင့်တိုက်စားခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
ဤအမျိုးအစားသုံးမျိုးကိုရောနှောခြင်းဟုရည်ညွှန်းသည်။ သို့သော်မည်သည့်မြေအမျိုးအစားတွင်မဆိုလွှမ်းမိုးနိုင်သည်ဆိုပါက၎င်းကို၎င်း၏အမည်တွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ သာဓကအားဖြင့်သဲသောင်များသည်သဲကျောက်ဘက်သို့အနည်းငယ်မျှသောဓာတ်သတ္တုပမာဏနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အနည်းငယ်မျှရောစပ်နိုင်သည်။ နုန်းဆန်သောသဲများသည်သဲလွှမ်းမိုးနိုင်သော်လည်းအချို့သော loam ရောစပ်မှုလည်းရှိသည်။ ဤဝေါဟာရများသည်ကျွန်ုပ်တို့အားမြေဆီလွှာ၏ပျမ်းမျှအမှုန်အရွယ်အစားကိုသိရှိရန်နှင့်၎င်းအားအသုံးအများဆုံးလက္ခဏာများကိုလည်းကူညီပေးသည်။
“ မြေဆီလွှာအိတ်များ” အဖြစ်ရောင်းချသည့်ပစ္စည်းများသည်အမြဲတမ်းရောနှောခြင်းဖြစ်သည်။ အမှန်မှာ၎င်းတွင်မည်သည့်မြေဆီလွှာမျှမပါဝင်နိုင်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအသုံးအနှုန်းမှာ“ potting mix” ဖြစ်ပြီးအချို့သောရောင်းသူများသည်မြေဟူသောဝေါဟာရကိုမသုံးဘဲထိုအသုံးအနှုန်းကိုအသုံးပြုကြသည်။
လိုအပ်ချက်သည်ဤနေရာတွင်အသုံးပြုရန်မျှတသောစကားလုံးဖြစ်သည်။ သို့သော်နည်းပညာအရဆိုလျှင်သင်သည်မည်သည့်အမျိုးအစားကိုမဆိုကုန်ဆုံးရန်နှင့်ဝယ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဆွေး, ခြံကနေအသက်ရွက်, ဒါမှမဟုတ်အခြားသွင်းအားစုများအသုံးပြု။ အိမ်မှာတ ဦး တည်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်အိပ်ယာအသစ်တစ်ခုကိုစတင်ရန်ကန ဦး အော်ဂဲနစ်မြေဆီလွှာရောစပ်မှုအနည်းဆုံးအနေဖြင့်ရောနှောခြင်းကိုအသုံးပြုရန်ကောင်းသည်။
သင်၏အိပ်ရာအရွယ်အစားပေါ် မူတည်၍ သင်ကဖြည့်ရန်အိတ်များရောနှောထားသောပစ္စည်းများကို ၀ ယ်နိုင်သည်။ တနည်းအားဖြင့်များစွာသောရှုခင်းထောက်ပံ့ရေးကုမ္ပဏီများသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အရောအနှောများကိုအမြောက်အများရောင်းကြသည်။ ရွေးချယ်မှုနှစ်ခုစလုံးသည်သင်စတင်ရန်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။
ကွန်တိန်နာကြီးထွားရန်အတွက်မြေဆီလွှာအမြဲတမ်းမလိုအပ်ပါ။ များစွာသောအပင်များသည်၎င်းတို့၏သီးခြားလိုအပ်ချက်များနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သောအရောအနှောရောနှောခြင်းတွင်အလွန်ပျော်ရွှင်ကြသည်။ သို့သော်မကြာခဏသဲကို၎င်း၏အမှုန်အရွယ်အစားကြောင့်ပိုကောင်းသည့်ရေနုတ်မြောင်းကိုထောက်ပံ့ပေးသောကြောင့်ရောနှောခြင်းအိတ်များကိုထပ်ထည့်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်ကသင်ထင်သလောက်မထင်သည့်တိုင်မြေဆီလွှာအနည်းငယ်သာရှိနိုင်သည်။
ယေဘုယျစည်းမျဉ်းအရထရပ်ကားကြီးသည်အနည်းဆုံးမြေဆီလွှာအချို့ကို အသုံးပြု၍ ကောင်းမွန်သောရေမြောင်းစွမ်းရည်ကိုသေချာစေရန်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဥယျာဉ်ကုတင်များသည်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ဖြည့်တင်းနိုင်သောပစ္စည်းပမာဏကိုယူနိုင်သဖြင့်အခြားအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူမြေဆီလွှာအချို့ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သင်၏မြင့်တက်နေသောအိပ်ရာကိုဖြည့်ရန်ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
ထွက်ရှိအမျိုးမျိုးသောအိတ်စွပ်ရောနှောကွဲပြားခြားနားသောပါဝင်ပစ္စည်းများစီးပွားဖြစ်ရောစပ်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်ဥပမာတစ်ခုပေးရန် Espoma ၏မြင့်တက်သောအိပ်ယာဥယျာဉ်များတွင်ပါဝင်သောသစ်သားထုတ်ကုန်များ၊ sphagnum ပေါ်ရှိသစ်ဆွံ၊ perlite, limestone, alfalfa meal, kelp meal, အမွေးမုန့်၊ တီကောင်သတ္တုများပုံသွန်းများနှင့်ယူကက်ထုတ်ယူသည့်အပြင်အချို့သော mycorrhizal ဘဝ။ နည်းပညာအရပြောရရင်၎င်းသည်ကြီးမားသောကွန်တိန်နာများ (သို့) အိပ်ရာထရန်အတွက်စိုစွတ်သောဥယျာဉ်ခြံတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်အိတ်များမှကြိုတင်ရောနှောခြင်းကိုရွေးချယ်လိုပါက၎င်းသည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။
သို့သော်ထိုအစိတ်အပိုင်းများအားလုံးသည်အဘယ်နည်း၊ သူတို့ဘာလုပ်ကြသနည်း။ အကြောင်းအသေးစိတ်ပြောရအောင်။
သင်၏အပင်များအတွက်အစိုဓာတ်လိုအပ်သော်လည်းအစိုဓာတ်သိပ်မလိုအပ်ကြောင်းကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်သည်။ ရေနုတ်မြောင်းမှုလိုအပ်ချက်သည်အပင်အမျိုးအစားများအကြားကွဲပြားသော်လည်းမြေဆီလွှာအတွင်းရှိရေများများကဲ့သို့သာမန်ဥယျာဉ်ပင်အများစုသည်လွတ်လပ်စွာထွက်ခွာသွားနိုင်သည်။ သငျသညျဥယျာဉ်မြေဆီလွှာနှင့်အတူစတင်ပုံမှန်အားတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ကျုံ့သောကြောင့်လေမှဖြည့်စွက်ခြင်းလည်းလိုအပ်သည်။ အပင်တွေမှာအမြစ်တွေမှာရေလိုပဲလေလိုတယ်။
Perlite သည်ရှုထောင့်နှစ်ခုလုံးအတွက်သုံးသောအသုံးအနှုန်းဖြစ်သည်။ ဤကျယ်ပြန့်သောမီးတောင်ကျောက်သည်အလွန်ပေါ့ပါးပြီးလုပ်ကိုင်ရလွယ်ကူပြီးမြေဆီလွှာကိုလည်းနည်းနည်းလျော့နည်းစေသည်။ ၎င်းသည်အမှုန်အရွယ်အစားပိုမိုကြီးမားသဖြင့်မြေဆီလွှာသာမကရေနုတ်မြောင်းကိုလေစီးဆင်းစေသည်။
နှစ်မျိုးစလုံးအတွက်အရာများစွာကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုသော်လည်းအချို့မှာအစိုဓာတ်သို့မဟုတ်ရေနုတ်မြောင်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဤတွင် aeration သို့မဟုတ်ရေနုတ်မြောင်းတိုးတက်စေခြင်းနှင့်အစိုဓာတ်ကိုထိန်းထားခြင်း / စုပ်ယူခြင်းတို့အတွက်အသုံးများသောဖြည့်စွက်ချက်များအကျဉ်းချုပ်ကိုဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသည်။
Perlite : ရေနုတ်မြောင်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးပေါ့ပါးပြီးရေအနည်းငယ်ကိုဖမ်းယူနိုင်သည်။
စည်များ နောက်ဆုံးမှာပြိုကွဲလိမ့်မည်ဟုရေနုတ်မြောင်းသည်။ အလွန်ပေါ့ပါးသည်
ချော်ရည် cinders: ဤရွေ့ကားသေးငယ်သောရေကိုဖမ်းနေစဉ်လေထုနှင့်ရေနုတ်မြောင်းကိုတိုးတက်စေတဲ့မီးတောင်ကျောက်အပိုင်းအစများဖြစ်ကြသည်။ perlite နှင့်မတူဘဲ၎င်းသည်နောက်ဆုံးတွင်မြေဆီလွှာ၏အလေးချိန်ကြောင့်မကြေမွတော့ပါ။
သက်ကြီးရွယ်အိုသစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ: ဤအရာသည်ရေနုတ်မြောင်းကိုတိုးတက်စေရုံသာမကရေကိုစုပ်ယူနိုင်သည်။ သက်ကြီးရွယ်အိုများသည်တဖြည်းဖြည်းပြိုကွဲပျက်စီးခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်ဥယျာဉ်ကုတင်များမှအာဟာရများကိုမလုယူနိုင်တော့ပါ။
အုန်းသီးကြွေ : ဤပေါ့ပါးသောပစ္စည်းသည်နောက်ပိုင်းတွင်စက်ရုံအသုံးပြုရန်အတွက်ရေကိုစုပ်ယူသည်။ ၎င်းသည်မြေဆီလွှာကိုလည်းလျော့ကျစေပြီးနောက်ဆုံးတွင်ပြိုကွဲသွားလိမ့်မည်။
Sphagnum ပေါ်ရှိသစ်ဆွေးရေညှိ : အစပိုင်းတွင်၎င်းကိုစိုစွတ်စေရန်ခဲယဉ်းသော်လည်း၊ သစ်ဆွေးခြောက်သွေ့ခြင်းသည် hydrophobic ဖြစ်သော်လည်းစိုထိုင်းသည်နှင့်အချိန်ကြာရှည်စွာအစိုဓာတ်ကိုထိန်းထားနိုင်သည်။ စိုစွတ်အောင်ထားပါ၊ ၎င်းသည်စိတ်ကူးဖြည့်စွက်ချက်ဖြစ်သည်။
တီကောင်သတ္တုများပုံသွန်း : သူတို့၏အလေးချိန် ၁၀ ကြိမ်နီးပါးကိုရေတွင်စုပ်ယူနိုင်သည့်အတွက်တီကောင်သတ္တုများသည်အစိုဓာတ်ထိန်းရန်အလွန်ကောင်းသည်။
ပိုးမွှား : ဤဓာတ်သတ္တုသည်ရေမြှုပ်ကဲ့သို့ရေကိုစုပ်ယူသည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှမြေဆီလွှာထဲသို့အစိုဓာတ်ကိုထုတ်လွှတ်ပေးသည်။
ကြမ်းတမ်းသော Straw / Hay: ပိုများသောမကြာခဏ mulch အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ကြီးမားသောအရွယ်အစားသည်၎င်းကိုလေနှင့်ပစ်ရန်အတွက်အသုံးချပြီးရေကိုစုပ်ယူသည်။ ဒါဟာလျင်မြန်စွာပြိုကွဲပျက်စီး။
စက်ရုံအခြေပြုဆွေး ဘယ်လောက်ပဲဆွေးမြေ့နေပါစေသင်အမြဲတမ်းပိုဆွေးလိုအပ်သည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်မြေဆီလွှာကိုဖြိုဖျက်ခြင်းနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်တောက်ပမှုကိုတိုးတက်စေသည်နှင့်အမျှ၎င်းသည်မြေဆီလွှာကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
မှိုဆွေး : မှိုမွေးမြူရေးမှစွန့်ပစ်ပစ္စည်းသည်သင်၏ကုတင်ပေါ်တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်ရန်အလွန်ကောင်းသည်။
နွားချေး : composted ပြီးတာနဲ့ဒီစိတ်ကူးပြင်ဆင်ချက်နှင့်မှန်မှန်အသုံးပြုသင့်သောတစ်ခုဖြစ်ပါသည်! မြေ ures ဇာအားလုံးသည်သင်၏မြေဆီလွှာ၏ဏုဇီဝဗေဒအတွက်အစားအစာအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။
မြင်းချေး : ၎င်းသည်ကောင်းစွာဆွေး။ အသက်ကြီးပါက၎င်းသည်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကြက်ချေး : သင်၏ဟင်းသီးဟင်းရွက်များပတ်ပတ်လည်တွင်အသုံးပြုပါက၎င်းကိုပထမ ဦး ဆုံးဆွေးပေးသင့်သည်၊ သို့မဟုတ်ရာသီမကုန်မီအိပ်ရာထဲတွင်တိုက်ရိုက်ထည့်နိုင်သည်။
တီကောင်သတ္တုများပုံသွန်း ဤမယုံနိုင်လောက်အောင်သယံဇာတသည်အခြားမြေ than ဇာများထက်နည်းပါးသော်လည်းသင်၏မြေသြဇာကောင်းမွန်စေသည်။
အရွက်သို့မဟုတ်အရွက်မှို - ဥယျာဉ်များ၊ သစ်ပင်များအားလုံးအတွက်စိတ်ကူးကောင်းသည့်ပြင်ဆင်ချက်သည်သင်၏မြေဆီလွှာအတွက်အဖိုးတန်ပစ္စည်းများစွာကိုပေးသည်။ ဒါဟာအစအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ထိပ်တန်း mulch စေသည်။
Alfalfa အစားအစာ / အရိုးအစာ / အသွေးသည် / kelp မုန့်ညက် / အခြားအစားအစာများ: ဖော်ပြထားသောအစားအစာအမျိုးအစားများအပြင်အခြားဓာတ်မြေသြဇာများသည်ဓာတ်မြေသြဇာအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Alfalfa သည်နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်များပါသည်။
အော်ဂဲနစ်မြေသြဇာများ သင်ဓာတ်မြေသြဇာအရင်းအမြစ်အဖြစ်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ရောစပ်မှုများကိုထည့်သွင်းမထားပါက၎င်းသည်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာဖြစ်နိုင်သည်။ ဖြစ်နိုင်လျှင်ကယ်လစီယမ်၊ ဆာလဖာနှင့်သံတို့ကဲ့သို့သောအာဟာရဓာတ်ပါဝင်သည့်အရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ။
အထူးအရာများနှင့်အတူကူညီနိုင်သည့်အခြားအပိုဆောင်းဖြည့်စွက်ရှိပါတယ်။ ကုန်ပစ္စည်းများ စိုက်ပျိုးရေးထုံး ဒါမှမဟုတ် ကယ်လစီယမ်ကာဗွန်နိတ် အလွန်အကျွံမထည့်ရန်သတိထားပါပေမယ့်အက်ဆစ်မြေဆီလွှာ pH ကိုအဆင့်ဆင့်ကြားကူညီကူညီပေးနိုင်သည်။ ထိုအပိုပစ္စည်းများသည်အပင်တစ်ပင်၏မြေသြဇာမှအာဟာရကိုစုပ်ယူနိုင်စွမ်းကိုနှေးကွေးစေနိုင်သည်။
Mycorrhizae ဒါမှမဟုတ် အကျိုးရှိသောဘက်တီးရီးယား အိတ်စွပ်အိတ်များနှင့်အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာများစွာတွင်ပါဝင်သည်။ ဤအရာများသည်သင်၏အိပ်ရာပေါ်သို့တက်ရန်အဆင်ပြေသော်လည်းသင်၏သဘာဝတွင် mycorrhizae နှင့်ဘက်တီးရီးယားများသင့်မြေထဲတွင်ရှိသည်။ သို့တိုင်လူ ဦး ရေကိုတိုးမြှင့်ပေးရန်နာကျင်မှုမရှိပါ။
သင်မြန်လျှင်သင်အစပြုရန်အိတ်ဆောင်ရောနှောခြင်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကောင်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်သင်ဖြည့်ရန်ကြိုးစားနေသည့်အိပ်ရာသည်မည်မျှကြီးမားသည်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သင်တစ် ဦး ကိုအသုံးပြုနေသည်ဆိုပါက 6-in-1 အရပ်ရှည်ရှည်သွပ်ရည်စိမ်ကုတင် ထံမှ, သင်ရုံမြေဆီလွှာ၏ကုဗခြံကျော် (သို့မဟုတ် 30 ကုဗပေကျော်) သလောက်လိုအပ်နိုင်ပါသည်, ထိုသို့ဝယ်ဖို့အတော်လေးအနည်းငယ်အိတ်ပါပဲ။ ဤအိတ်အားလုံး၏စျေးနှုန်းသည်လျင်မြန်စွာတက်နိုင်သည်။ များစွာသောအိပ်ရာဥယျာဉ်သည်သင်၏ဒေသခံရှုခင်းထောက်ပံ့ရေးကုမ္ပဏီမှအမြောက်အများပေးပို့ရန်လိုအပ်နိုင်သည်။
ကျနော်တို့အပေါ်အကြံပေးချက်များကိုဆွေးနွေးပြီးပြီနေစဉ် မြင့်မားသောမြင့်တက်အိပ်ရာဖြည့် အတိတ်ကာလ၌, သင်အဖြစ်ကောင်းစွာနှင့်အတူဖြည့်အဘယျသို့သိရန်အရေးကြီးသည်။ အိတ်များရောနှောထားသောအရောအနှောများသည်မျိုးပွားမှုနည်းပါးသည်။ ဒါကြောင့်အဆုံးအထိ, ငါသင်အိတ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းကိုရွေးချယ်လျှင်, နှင့်အတူစတင်ရှိသေးရဲ့အဘယျသို့အပြင်အချို့သောအရည်အသွေးကောင်းသောဆွေးသို့မဟုတ်ဆွေးချေးအတွက်အလုပ်လုပ်ရန်အကြံပြုပါသည်။ ဈေးနှုန်းကျဆင်းရုံသာမကအလုံးစုံအရည်အသွေးကိုပါတိုးတက်စေသည်။
သင်ကအစ မှနေ၍ တည်ဆောက်နေသည်ဆိုပါကကောင်းမွန်သောအခြေခံကျသောနည်းလမ်းမှာသင်၏ခြံထဲမှအရည်အသွေးမြင့်အပေါ်ယံမြေဆီလွှာ (၃၀%) (ကျောက်တုံးကြီးများကိုဖယ်ရှားရန်သန့်စင်သည်)၊ ၄၀% သော composted ပစ္စည်းများ၊ ၂၀% ဝေဟင်နှင့်ရေနုတ်မြောင်းများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေလိမ့်မည်။ အစိတ်အပိုင်းများ (ဓာတ်မြေသြဇာများ၊ အပိုအစိုဓာတ်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း၊ လိုအပ်ပါက pH ကြားခံများသို့မဟုတ် ၁၀% တီကောင်သတ္တုများပုံသွန်းခြင်း) ။
သင်တို့သည်လည်းတူညီသောအစိတ်အပိုင်းများကိုဆွေး, ပေါ်ရှိသစ်ဆွေးနှင့် vermiculite ဖြစ်သည့် 'Mel ရဲ့ရောနှော' အဖြစ်မကြာခဏရည်ညွှန်းတဲ့အရောအနှော, တည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။ လူများစွာသည်ထိုရောစပ်ခြင်းဖြင့်ကျိန်ဆိုကြသည်၊ ပေါ်ရှိသစ်ဆွေးမော့စ်သည် Home Depot ကဲ့သို့သောဥယျာဉ်အလယ်ဗဟိုရှိသေတ္တာကြီးကြီးသိုမဟုတ်စျေးကြီးသည်။ လိုအပ်ပါကအိပ်ရာထဲရှိအပင်များအခြေပြုဆွေးအစားအသက်ကြီး။ ဆွေးမြေ ure ဇာကိုသုံးနိုင်သည်။
သင်သည်သင်၏ထမြောက်ပြီးသောဥယျာဉ်ကုတင်များပြည့်လာပြီးအသုံးပြုသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်ပြီးပြီဟုထင်ရပေမည်။ သို့သော်အော်ဂဲနစ်မြေဆီလွှာရောစပ်မှုသည်အိပ်ရာထဲရှိပစ္စည်းပျက်သွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်အချိန်တွင်တဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းသွားလိမ့်မည်။ ဓာတ်သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများဆက်ရှိနေမည်ဖြစ်သော်လည်းဆွေးနှင့်အခြားအော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှပြိုကွဲပျက်စီးပျောက်ကွယ်သွားနိုင်သည်ဟုယူဆရသည်။
ဆွေးပေါင်းထည့်ခြင်းကသင်၏ရောနှောမှုကိုပြန်လည်နုပျိုစေဖို့သင့်ရဲ့ပထမဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်သင့်သည်။ တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်မြေဆီမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အထူကောင်းသောထူထဲသောဆွေးများသည်ထမြောက်။ ကုတင်များပေါ်မှအတက်များများ ဆက်၍ မြေသြဇာဆက်လက်တည်မြဲစေရန်သေချာစေသည်။ ၎င်းသည်အပင်ပေါက်သည့်ပေါင်းပင်များကိုလည်းလျော့နည်းစေသည်။ တကယ်တော့, ဆွေးအလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေသည်နှင့်သင်အော်ဂဲနစ်ဥယျာဉ်လုပ်နေလုပ်နေလျှင်မှန်မှန်လျှောက်ထားသင့်!
သင်နှင့်အတူအမှုအရာထိပ်ဆုံးချင်လျှင်ဆွေးအပြင်, သင်ရံဖန်ရံခါအခြားရောနှောထုတ်ကုန်ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ ရေနုတ်မြောင်းများအတွက်မလိုအပ်ပါကအပိုသဲများစွာကိုထပ်ထည့်ရန်မကြိုးစားပါနှင့်။ သို့သော် vermicompost (သို့) မြေ comp ဇာများပုံမှန်အသုံးပြုခြင်းသည်အမြဲတမ်းကောင်းပါသည်။ အိပ်ရာထိပ်ကိုလဲရွက်များဖြင့်စုပုံ။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှဖြိုဖျက်နိုင်သည်။ နွေ ဦး ရာသီရောက်သောအခါအရွက်အများစုသည်ကိုယ်ပိုင်ဆွေးသို့ပြန်သွားကြလိမ့်မည်!
အကောင်းဆုံးပေါင်းပင်နှင့် dandelions များအတွက်အစာကျွေး